Okucatshangwa NguNkulunkulu Ngezenzo Zomuntu | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Ukukhathazeka kukaNkulunkulu kuyaqahubeka ukuba
Yindlela ngamunye wenu enenza ngayo
nendlela enikhuluma ngayo.
Phezu kwalesi sisekelo, uyonquma isiphetho senu.
UNkulunkulu kufanele akwenze kucace lokhu kini.
Ngeke abe nabubele
kulabo abangathembekile ngezikhathi zosizi,
Noma ngabe ningobani,
Ububele bakhe buhamba bugcine.
Akabathandi labo abakhaphelayo,
ingasaphathwa eyokuthanda ukusondelana
nalabo abadalula okuthandwa ngabangani babo.
Lokhu kuyisimo sikaNkulunkulu nombono Wakhe.
Yilokhu okufanele uNkulunkulu akutshele khona:
Noma ngubani owephulayo, wephula inhliziyo Yakhe
ngeke athole uzwelo kabili;
labo abebethembekile bayohlala besenhliziyweni Yakhe.
Okwedlule：Incazelo Yangempela yokuthi “Izwi Livela Lisenyameni”
Okulandelayo：Imibono Nomcabango Akusoze Kukusize Ukuthi Wazi UNkulunkulu
I Kusuka ekuqaleni kuze kube namuhla, yisintu kuphela esibe nendlela yokukhuluma noNkulunkulu, sixoxe noNkulunkulu. Phakathi kwazo zonke izidalwa, zon…